Isigwebo Esiye Sazibalula SeNkundla Ephakamileyo YaseIndiya
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Umhla kaJulayi 8, 1985, waqala njengazo zonke ezinye iintsuku kwidolophu encinane ekumntla-ntshona weIndiya ekuthiwa yiKerala. Kodwa ke ngolu suku, utitshala omkhulu wesikolo ekwakufunda kuso abantwana abathathu abangamaNgqina kaYehova, wathi makuhlatyelw’ umhobe wesizwe okanye ingoma yelizwe. Kwakufuneka bonke abantwana beme baze bacule. Kodwa uBijoe ona-15, udadewabo uBinu Mol ona-13 noBindu ona-10 abazange bavume ukucula. Iinkolelo zabo azibavumeli ukuba bacule umhobe wesizwe kuba bekholelwa ukuba uyinxalenye yonqulo zithixo yaye abafuni kunganyaniseki kuThixo wabo uYehova.
Utata waba bantwana uV. J. Emmanuel, wathetha notitshala-omkhulu nezinye iititshala zesi sikolo zaza zavuma ukuba abantwana bakhe bangaqhubeka nesikolo nakubeni bengawuculi umhobe wesizwe. Omnye umsebénzi wesi sikolo wakuva oku, waya kuxela. Ekugqibeleni, lo mcimbi wada waya kuthethwa nasePalamente kuba kusithiwa aba bantwana abalithandi tu ilizwe labo. Kungekudala emva koko, omnye umhloli wezikolo wayalela utitshala-omkhulu ukuba abagxothe aba bantwana kuba bengafuni ukucula umhobe wesizwe. Isibheno esafakwa ngutata waba bantwana sokuba babuyiselwe esikolweni sawa phantsi. Emva koko wabhenela kwiNkundla Ephakamileyo yedolophu yaseKerala. Le nkundla nayo yasikhaba isicelo sakhe, ngelokuncamela waya kweyona nkundla iphakamileyo yelizwe lakhe, iNkundla Ephakamileyo yaseIndiya.
INkundla Ephakamileyo YaseIndiya Ivumelana Nomgaqo-Siseko
NgoAgasti 11, 1986, iNkundla Ephakamileyo yaseIndiya yaya yasijika isigwebo esawiswa yiNkundla yaseKerala kwityala likaBijoe Emmanuel nxamnye neKerala. Ekulichubeni kwalo eli tyala, le Nkundla yathi ukubagxotha aba bantwana kuthetha ukuba “amalungelo neenkolelo zabo zonqulo” ezikumgaqo-siseko waseIndiya zisingelwa phantsi. Ijaji uO. Chinnappa Reddy yathi: “Akukho ndawo emthethweni, enyanzelisa ukuba kuculwe.” Le nkundla yaphinda yawuhl’ amahlongwane umthetho yafumanisa ukuba ilungelo lokuthetha likwaquka nokuthula uthi cwaka, yaye ukuma xa kuculwa umhobe wesizwe kwanele xa ufuna ukubonisa imbeko. Le nkundla yathi aba bantwana mababuyiselwe esikolweni.
Le jaji yaphawula oku: “[AmaNgqina kaYehova] awawuculi umhobe wesizwe aph’ eIndiya, eBritani, eMerika phofu naphi na. . . . Isizathu sokuba angaculi kukuba, unqulo lwawo alubavumeli kodwa eyona nto ayenzayo kukuthandaza kuYehova uThixo wawo.”
Eli Tyala Lisetyenziswa Njengomzekelo
Eli tyala liye lazibalula, yaye sithethanje lisetyenziswa njengomzekelo obonisa indlela amalungelo nenkululeko yonqulo enamandla ngayo. iNkundla iyaqonda ukuba le mithetho isenokutshintsha ngenxa yoko kufunwa sisininzi, imeko yokuziphatha nempilo yabantu, ngoko ifuna amazwe anganyanzeli zimvo zawo ebantwini. Isigwebo sale nkundla sathi: “Kukho imithetho emibini ekumgaqo-siseko weli lizwe, ebangela ukuba kungabikho semthethweni ukunyanzela abantu ukuba bacule umhobe wesizwe xa izazela zabo zingavumi.”
Esi sigwebo sikhusela namaqela amancinane. Le nkundla yahlabela mgama yathi: “Ukuze sibone ukuba nyhani ilizwe likwidemokhrasi, kufuneka nawona maqela mancinane ahlala kulo akwazi ukungenelwa kumgaqo-siseko.” Ijaji uReddy yoleka yathi: “Ayinamsebenzi into esiyicingayo thina. Ukuba umntu unenkolelo yonqulo, umele akhuselwe ngumgaqo-siseko.”
“Amasiko, iimfundiso nomgaqo-siseko wethu usifundisa ukuba sinyamezelane, singoobani ke thina ukukutshintsha oko?”—Ijaji uO. Chinnappa Reddy
Imiphumo Yesi Sigwebo
Kuhlala kuthethwa ngeli tyala ePalamente, kanti kukhe kubhalwe nangalo. Likhona nakwiincwadi zabantu abafundela ubugqwetha. Kumanqaku akumaphepha-ndaba nakwiincwadi zomthetho kuhlalwa kuthethwa ngalo eIndiya. Esi sigwebo siye sanceda yaziwa ngokubanzi inkululeko yonqulo. Sincede nasekukhuseleni inkululeko yokuthetha.
Wonke Umntu Uyancedakala Xa Kukhuselwa Amalungelo Omthetho
Intsapho yakwaEmmanuel (ngasemva ukusuka ekhohlo ukuya ekunene) uBinu, uBijoe noBindu; (ngaphambili) uV. J. Emmanuel noLillykutty
Maxa wambi, le ntshapho yakwaEmmanuel yayikhe iphatheke kakubi, igrogriswe ngamanye amaxesha ide ithenjiswe nangokufa, kodwa ke abazisoli tu ngokungavumi ukuyekelela kunqulo lwabo. Enye yeentombi zale ntsapho esele itshatile ngoku, uBindu, ubalisa athi: “Ndathi ndingalindelanga, ndadibana negqwetha elalifunda ngetyala lethu esikolweni salo. Lawancoma gqitha amaNgqina kaYehova ngokulwela amalungelo awo.”
UV. J. Emmanuel ubalisa athi: “Kutshanje ndiye ndadibana nejaji yeNkundla Ephakamileyo uK. T. Thomas, osele esidla amaqosh’ ebhatyi ngoku. Xa wafumanisa ukuba ndingutata waba bantwana bathathu babekweli tyala, wandibamb’ isandla waza wathi, sihlandlo ngasinye ethetha namagqwetha, akalibali ukuthetha ngetyala lomhobe wesizwe nabantwana besikolo, ngoba uthi eli tyala lelona lakhe lazibalula lamalungelo abantu.”
Eli tyala lakha umkhanya wenkululeko yokuthetha kweli laseIndiya, loo nto isenjalo nanamhlanje nakubeni sele kudlule iminyaka engaphezu kweyi-30 sawiswayo isigwebo. AmaNgqina kaYehova ayazidla ngokuba ekwazile ukufaka isandla kwamanye amalungelo abantu baseIndiya.
ULillian Gobitas Klose, Umfundi Oyintombazana Owayekwityala LeNkundla Ephakamileyo Ngo-1940, Usweleke Ena-90